Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Dalarnas län / Borlänge
Borlänge waxeey in dhaafeeyso 50 000 oo qof oo fiican. Halkaan waxaa ku yaalo IKEA iyo carwada weeyn ee Kupolen. Borlänge waa magaalo dhaqan badan oo leh dhaxal heeso weeyn.
636 kiilomitir oo laba jibaaran
Falun 21 kiilomitir
Gävle 111 kiilomitir
Västerås 132 kiilomitir
Stockholm 216 kiilomitir
Waxeey uu dhawdahay dabiicada, waxeeyna lee daahay fursado fiican oo toobarasho iyo toobar caafimaad. Dhamaadka isbuuca bartamaha jawigiisa wuu kacaa oo dhalinyar iyo da' weeyn ba waxaa soo jiito maqaayadaha iyo baararka oo leh hees toos ah.
Borlänge waxaa ku taal shirkad guriyaal kireeyso oo degmada lee dahay, Tunabyggen. Sido kale waxaa jiro shirkado guri madaxbanaan oo badan, waxaana ka heleeysaa bogga degmada.
Dadka luuqadaha ku hadlo degmo ka degmo wee ku duwanan karaan taasi oo keeneeyso sii guurida iyo usoo guurida. Hada koox-luuqadeedka ugu weeyn Borlänge waa af soomaali, afka thayland, af cari iyo af kurmanji. Waxaa kor uu soo kacooyo afka iraan, af turki, afka albaaniya iyo af tigrinya.
Borlänge waxaa ka jiro ururo badan oo ku jiheeysan wax yaalo kala duwan. Degmada diwaankeeda-ururueed waxaad si gaar ah uga raadin kartaa urur uu haboon waxa aad jeceshay.
Bartamaha Borlänge waxaa ku taalo maktbada Borlänge, xafiiska shaqada, Hey'adda canshuuraha, Qasnada ceeymiska, xarunta jiheeynta iyo dhigida iswiidhiska soo galooytiga, sfi. Xafiiska maamulka bulshada waxuu ku dhexyaal guriga magaalada, Röda vägen 50. Warbixin ku socoto soo guuraha cusub waxaad ka heleeysaa boggeena.
IKEA waa dukaanka carwada alaabta guriga ee ugu weeyn uguna cusub, waxuuna ku yaaala Norra Backa, agagaarka cawada Kupolen. Ta till vara i Åselby waxuu gadaa alaab guri oo la soo isticmaalay.
Soo arag oo samee Maktabad Ta till vara i Åselby
Codsiga boos dugsi xanaano Warbixin ku saabsan dugsiga xanaanda furan Warbixin kale oo ku saabsan xanaanada caruurta degmadeed
Bogga Gysams warxaa ku jirto warbixin fudud oo ku saabsan habka loo doorto dugsiga sare, iyo barnaamijyada nuucyadood iyo dugsiyada ardayda loo soo bandhigi karo.
Akhri dheeraad ku saabsan dugsiga hoose-dhexe ee degmadan. Akhri dheeraad ku saabsan dugsiga sare ee degmadan. Bogga Gysams
Akhri dheeraad ku saabsan waxbarashada dadka waaweyn ee degmadan. Iswiidhiska soo galooytiga Warbixin ku saabsan waxbarashada xirfad shaqo Warbixin ku saabsan dhigasho jaamacad
Talobixinta caafimaadka waxaad ka heli kartaa 1177 - Hagida daryeelka, warbixin dheeraad ah waxay ku jirtaa Gobolka Dalarnas boggeeda intarnatka. Xilliga xaalado khatar ah: Wac SOS Alarm lambarka talefoonka 112.
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Daryeelka hooyooyinka iyo umulisada Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha.
Markasto oo aad xariir la yeelaneeyso hey'addaha, xafiisyada degmada iyo daryeelka waxaad xaq uu lee dahay kaalmo turjumaan hadddii aada ku hadlin ama fahmin iswiidhishka. Taasi waxaa sii balaminaayo qeeybta bulshadeed ee arinta ku saabsan tahay.
Degmada Borlänge waxaad raaceeysaa basaska Dalatrafik oo bosteejooyin ku leh degmada.
Borlänge waxeey lee dahay shaqo-dhiibe weeyn – xafiiska degmada Borlänge, SSAB iyo Hey'adda gaadiidka waa sadax ka mid ah dad badan oo Borlänge degan ka shaqeeyaan. Haddii aad dooneeyso in aad shirkad furato waxaa warbixin dheeraad taala xafiiska shirkadeeynta ee gudaha degmada.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Borlänge